कोरोना भाइरसकाे संक्रमण १८५ देशमा फैलियो, कुन देशमा अवस्था कस्तो?
कोरोना भाइरसकाे संक्रमण १८५ देशमा फैलियो, कुन देशमा अवस्था कस्तो?
काठमाडौं– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विश्वका १८५ देशमा फैलिएको छ। शनिबार बिहान ७:३० बजेसम्म वर्ड मिटर्सकाे तथ्यांकअनुसार विश्वभर भाइरसकाे संक्रमण २ लाख ७५ हजार ७ सय ९६ जनामा देखिएको छ। जसमा ३० हजार ८ सय ६३ जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्।
९१ हजार ९ सय १२ जना उपचारपछि निकाे भएका छन्। भाइरसको संक्रमणको कारण थप १ हजार ३ सय ६६ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ। याेसँगै विश्वमा काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ११ हजार ३ सय ९७ पुगेकाे छ।
काेराेनाका कारण इटालीमा पछिल्लाे २४ घन्टामा ६२७ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ। याेसँगै इटालीमा काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ४ हजार ३२ पुगेकाे छ। इटालीमा ५ हजार ९ सय ८६ जना काेराेनाका नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। याेसँगै इटालीमा काेराेना भाइरस संक्रमितकाे संख्या ४७ हजार २१ पुगेकाे छ।
स्पेनमा शुक्रबार र शनिबार बिहान ३ हजार ४ सय ३३ जना नयाँ बिरामी संक्रमित भएका छन्। स्पेनमा शुक्रबार र शनिबार बिहान ७ बजेसम्म थप २ सय ६२ जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै स्पेनमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ९३ पुगेको छ। स्पेनमा हालसम्म संक्रमितको संख्या २१ हजार ५ सय १० पुगेको छ।
त्यस्तै जर्मनीमा ४ हजार ५ सय २८ जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। शुक्रबार र शनिबार बिहान ७ बजेभित्र थप २४ जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै जर्मनीमा संक्रमित हुनेको संख्या १९ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ भने ६८ जनाको मुत्यु भएको छ।
इरानमा शुक्रबार र शनिबार बिहान मात्र १ हजार २ सय ३७ जना नयाँ बिरामी भेटिएका छन् भने १ सय ४९ जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै इरानमा १९ हजार ६ सय ४४ जना संक्रमित भएका छन् भने १ हजार ४ सय ३३ जनाको मुत्यु भएको छ।
अमेरिकामा शुक्रबारमात्र थप ५ हजार ७ सय ३३ जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। शुक्रबार कोरोना संक्रमणका कारण ५५ जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ६२ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या १९ हजार ५ सय २२ पुगेको छ।
त्यस्तै चीनमा शुक्रबार र शनिबार बिहानसम्म ४१ जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् भने थप ७ जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै चीनमा संक्रमित हुनेको संख्या ८१ हजार ८ पुगेको छ भने मुत्यु हुनेको संख्या ३ हजार २ सय ५५ पुगेको छ।